4 inch yekugezera pombi Chrome
musha / Mabheji ekugezera / Imwechete Yakabata Bathroom Faucets / WOWOW 4 Inch Centerset Imwe-Handle Yekugezera Faucet MuChrome
Easy setup: iyi yekugezera kunyura faucet yakagadzirirwa kufanana 3-gomba, 4-in. Centerset kurongwa
Drain musangano unosanganisirwa: pop-up gungano pamucheto unobatanidza unosanganisirwa zvishoma kuti upedze kutaridzika kwako.
2320700C yekuraira mirairo
Chrome yekugezera pombi 2320700C
Iyo yakanyatsogadzirwa chrome yekugezera faucet yeWOWOW inopa kuratidzika kupenya kune yako yekugezera. Iyi chrome yekugezera kunyura faucet ine fashoni yakasarudzika retro dhizaini. Ichapa zvinokatyamadza kune yako yekugeza yekushongedza, mune chero mhando yekugara yauri kugara. Iyi chrome yekugezera faucet inogona kunge yakaiswa mune imba yekurenda, nyowani itsva, imwe-imba, mota imba, bungalow, yekufambisa turera, kana imba. Iyo dhiza-rakaiswa chrome yekugezera faucet inoratidzika girazi-senge chrome kupedzisa iyo inopa kutarisa kune chero chero yekugezera. Iko kupedzisa kweChrome kunoratidzwa zvakanyanya kukupa iwe unoratidzika kupenya unosanganisika zvakanaka neanenge chero maitiro ekugezera. Nayo inoyerera curves inowedzera yakasarudzika uye asi yanhasi kubata kubatiro kwako.
Iyo imwechete inobata chrome yekugezera faucet inopa nzira iri nyore yekufambisa iyo kubata-uye-kumusoro uye kumusoro-kumusoro-pasi-pasi zvakanaka. Nenzira iyi iwe unogona kudzora huwandu hwemvura uye tembiricha zviri nyore neruoko rumwe chete. Zvinoita kuti zvive nyore kuderedza zvishoma kuyerera kwemvura ichierera zvichienderana nezvinodiwa zvako. Iwe unoshamiswa pamwe nekureruka kwekuyerera kwemvura kunogona kudzorwa.
Yakakwirira-yemhando yekushandisa chrome yekugezera faucet
Chrome yekugezera faucet yeWOWOW yakagadzirwa zinc, uye yakapera neruoko rwakapukutwa uye rwakagadzirwa chrome. WOWOW inoshandisa mamiriro-e-iyo-tekinoroji yekuvimbisa zvese kunaka kusingaperi kwenguva uye kusimba kusingaperi. Iyo ceramic vheti semuenzaniso inopa kudonha-isina kuita kuti utendeuke zvakanaka. Yakanakisa mhando yekatoni katoni kune rimwe divi yakapasa bvunzo neinopfuura mazana mashanu emvura mitsetse. Uye zvakadaro chrome yekugezera faucet yanga ichiita nemazvo mushure meyese mayedzo. WOWOW nekuda kweizvozvo inodarika yese indasitiri hupenyu hwakareba maererano nenyaya yekuqina.
Kunze kwekugara kwenguva refu, zvakanakawo kuziva kuti uve nemvura yakachena uye yakachena nguva dzose. Nekuda kwemasimbi akakura anoshandiswa, iwe unowana kutungamira pasina mvura nguva dzese. Izvi zvichadzivirira hutano hwako iwe nemhuri yako nekusingaperi. Kusimudzira kune chrome yekugezera faucet yeWOWOW saka haingangove iyo inonakidza chimiro chako chekugezera, ichave sarudzo ine hutano zvakare!
Centerset chrome yekugezera faucet
Iyo centralset chrome yekugezera faucet inogona kuiswa nyore nyore newe. Iyi dhiza yakaiswa chrome yekugezera faucet yakagadzirira kune 4 inch 3-maburi Centerset kuisirwa. Icho chinhanho pakati pehuputi uye zvokubata chinosvika 4 inches. Nezvose zvinongedzwa uye zvinhu zvekusangana ino chrome yekugezera faucets inouya yakagadzirira kuzvi-ita-iwe pachako kuisirwa. Iyi DIY-kuisirwa ichakuchengetera mari yekuwedzera yepombi inodhura. Uye hazvidikanwa zvachose. Maitiro ayo ekushandura anoita kuti iite novice yekuisa iyi chrome yekugezera faucet mumaminitsi makumi maviri chete. Iyo yekuisa kit inosvikawo neine complimentary yekuisa magurovhosi. Nenzira iyi hauzokuvadze maoko ako netsaona kana iwe ukaisa chrome yekugezera faucet. Ndokumbira uzive kuti mitsetse yekugovera haina kuisirwa kana iwe ichida ivo, uye inotengeswa zvakasiyana.
Iyo spout kureba kweWOWOW's chrome yekugezera faucet ndeye 2.7 inches uye kusvika kwe spout ndeye 4.2 inches. Iyo imwechete yekugezera yekugezera faucets inokodzera yakajairwa 4-inches. Kunze kwezvo, iyo yakasarudzika chrome yekugezera faucet inouya ne pop up Stopper inosanganisira iyo yakasanganiswa yekusimudza tsvimbo. Iyo chrome yekugezera faucet inosangana zvakanaka pamwe neye chrome drain musangano. Iyo inoumba kubatana kwakabatana mune yako yekugezera kunyura. Unogona kuregedza mvura kupera kubuda mumba yekugezera ichinyura pasi tsvimbo inosimudza. Iyo easness yekubata tsvimbo inosimudza, inodzivirira kubva pakurwadzisa maoko ako paunenge uchigeza. Iyo dhongi yedhiza dhizaini yakagadzirirwa kuita kuti hupenyu hwako huve hutsanana uye hwakajeka.
Economic chrome yekugezera faucet
Iyo itsva AbS aerator inosevha inopfuura makumi mashanu muzana emvura. Iyo inodzora rwizi rwemvura nekupa inopesana nekumanikidza kurukova rwemvura. Izvi zvinotungamira kune anti-splatter rwizi rwemvura, uye inokuchengetedza iwe zvinoshamisa padhiriti yako yemvura. Zvichienderana nenzvimbo yako, yako bhajeti yemvura inogona kuwedzera kumusoro kumusoro. Naizvozvo zvakanaka kuti uzive kuti unogona kuchengetedza pamadhadha emvura, pasina kana kurasikirwa nebasa. Iwe hauzocherechedze mutsauko sezvo ruzivo rwako rwemvura ruchawedzera kunyange nekuda kwechinhu che anti-splatter.
Iyo yepamusoro performance Neoperl aerator inokupa iwe wakasununguka kugeza chiitiko. Nechekubata zvinyoro-nyoro neminwe yako, unogona kubvisa nyore nyore zvese zvakasara zvemvura zvasara senge calcium. Nenzira iyi iwe unogona kuchengeta yako chrome yekugezera faucet sechitsva uye kuita nemazvo. Iyo aerator yechrome yekugezera faucet inogonawo kubviswa nyore nyore nemaoko ako. Iwe hautombodi chero chishandiso kubvisa iyo aerator sezvo iwe unogona kungo simudza ichi chitsva chinhu. Iwe unogona kubvisa aerator kungave kuchenesa kana kuitsiva.
Njodzi-isina chrome yekugezera faucet
Iine yayo 3-gore warandi nguva, WOWOW inoratidza kuvimba kwayo mune chrome yayo yekugezera pombi. Neiyi yepamusoro chrome yekugezera pombi iwe une yakanakisa kukosha yemari iwe yaunogona kuwana mumusika. Izvo zvemhando yepamusoro zvigadzirwa hazvipikiswe, uye maererano nemari akaisa mari mutengo wakaderera sezvaungawana. Nekudaro, WOWOW inovimbisa kuti iwe haugone kuwana yemhando yepamusoro pombi yekugezera yemutengo mumwe chete. Kana iwe haugone kuwana iyi mhando yemhando yepamusoro yekugezera pombi pamutengo wakaderera. Nekuda kwemhando yepamusoro, WOWOW haatyi kukupa iwe yemakore matatu-makore warandi. Yako chrome yekugezera pombi inozotsiviwa nekukasira nechimwe chitsva kana chikazokuvara nekuda kwechimwe chikonzero.
Unogona kutenga WOWOW's chrome yekugezera pombi pasina njodzi zvachose. Iwe unowana yemari-mazuva makumi mapfumbamwe mari yekudzoserwa garandi. Kana iwe ukasazoitika 90% kugutsikana neyako nyowani yekugezera pombi yeWOWOW, iwe unozowana iyo yakazara kudzoserwa. Pasina mibvunzo yakabvunzwa, saizvozvo. Asi isu tine chivimbo chekuti hausi kuzodzosera yako faucet, sezvo isu tine vakawanda vakagutsikana uye vanodzosa vatengi kubva kumativi ese epasi. Tine chokwadi chekuti uchave nekugutsikana nezvekukosha kwemari yatiri kukupa.
Zvakanakira iyo chrome yekugezera faucet muchidimbu:
• Inopa wow-chinhu kune chero yekugezera
• Shiny chrome dhizaini
• Inoshanda zvakapusa
• Uine hunyanzvi kudhonza tsvimbo dhayeti inomira
• Yakagadzirwa yemhando yepamusoro zinc zinc alloy zvinhu
SKU: 2320700C Categories: Mabheji ekugezera, Imwechete Yakabata Bathroom Faucets Tags: 4 padiki, centerset, Single Handle
NSF ceramic disc valve, sanganisa mvura, 3-hole 4 mukati. Centeret dhizaini, nyore kuisa, 1 mubato wekudzivirira inopisa uye inotonhora mvura, chrome